Diego Costa Oo Cudur Dameer Ka Gallay Faras Looga Gubayo
HomeSpainDiego Costa Oo Cudur Dameer Ka Gallay Faras Looga Gubayo
Gudoomiyaha naadiga Atletico Madrid, Enrique Cerezo ayaa tilmaamay in safashada Weeraryahanka Diego Costa ee kulanka finelka Champions League maalinta Sabtida ah ay ku xidhan tahay , sida uu ugu ladnaado dawada laga farsameeyey mandheerta Faraska ee dhakhaatiirtu ku talliyeen inay deg-deg , wax uga tarayso caafimaadka 25 jirkan reer Spain.
Cerezo wuxuu ku celceliyey in haddii natiijo laga waago dawadaas aanay marna halis ama khamaar gallin Karin caafimaadka weeraryahankooda Costa.
Weeraryahanka qaranka Spain Diego Costa ayaa dhaawac muruqa ah looga saaray kulankii Barcelona ee kooxdiisa lagu gudoonsiiyey horyaalka Spain xilli ciyaareedkan
“Dawada mandheerta faraska ah ee uu qaatay sida ay ula falgasho jidhkiisa , caafimaadkiisana wax uga bedesho ayay ku xidhnaan doontaa inuu ciyaaraana” ayuu yidhi gudoomiye Cerezo.
“Anigu dakhtar ma ahi oo ma garanayo siday wax ugu tari doonto iyo inay waxyeelo hor leh u horseedi doontaba, haddiise aanay waxba u tarin, waxa u fiican inaanu ciyaarin ciyaartaas, waxaanan rajaynayaa haddii uu ka baaqdo, in ciyaaryahan kasta oo booskiisa buuxiyaa uu si fiican u meteli doono.
“Waxaan isu diyaarin doonaa sidii aanu u guulaysan lahayn, markaan ka fikirno garoonka ciyaartu ka dhacayso, guuldaro iyo guulba waan ka filan karnaa, Kooxduna maskax ahaan iyo jidh ahaanba waa diyaar.’
Waraysi: Ciyaaryahanadii Somaliland Ee Tagey Abkhazia – Video
Arsenal Oo Qarka U Saaran Weeraryahanka Higuain